Nin aalad uu sameystay ku duulaya oo ka gudbay Channel-ka Ingriiska 20 daqiiqo gudahood… – Hagaag.com
Posted on 4 Agoosto 2019 by Admin in Technology // 0 Comments
Hal-abuuraha Faransiiska Franky Zapata ayaa Axaddii ku guulaystay inuu ka gudbo Channel-ka Ingiriiska 20 daqiiqo gudahood asaga oo ku duulayey qalab uu sameeyey. Waxaa ku qasbanaaday inuu ka tanaasulo dalabkiisii ​​hore ka dib markii uu ku guul darreystay inuu ku dego meel shidaal laga qaato oo aaladiisa ay kula dhacday badda.
Franky Zapata oo ay kor kala socdeen seddex helikobtar, ayaa la arkaayay isagoo u gacan haadinaya dadweyne daawanayey ka hor inta uusan si nabdoon ugu soo degin magaalada Saint Margaret’s Bay, oo aad ugu dhow Dover xeebta koonfureed ee Ingiriiska subaxnimadii Axadda, sida laga soo xigtay sawirrada TV-ga Faransiiska.
Zapata ayaa wuxuu ku fashilmay isku day hore oo wuxuu ku dhacay badhtamaha meel mashquul badan ee shixnadaha maraakiibta maraan bishii Luulyo 25dii. Isaga uma uusan suurtagelin inuu ku dego doon ku sugeysay biyaha Ingiriiska si ay u siiso baakad cusub oo kerosene ah.
Zapata oo ka qeybgalay dabaaldegyadii maalinta Bastille ee Faransiiska 14kii Luuliyo ayuu kor ka daawanayey dhoolatus militari oo ka dhacay Paris, asaga oo dadweynihiii ku sugnaa goobtaasi aad ugu sacaba tumeen, wuxuu sheegay inuu isku deyi doono inuu ka gudbo Channel-ka si wanaagsan.
Wuxuu ka soo kicitimay dalka Faransiiska abbaare 0600 GMT wuxuuna shidaal ka qaatay meel badhtamaha badda ah ee 35-km wadada tageysa Dover.
Zapata wuxuu hormuud ka yahay farsamadiisa aalada biyaha laga dul duulo, Zapata wuxuu maareynayaa farsamo Flyboard Air kaas oo duulaya ilaa 140 km saacadiiba isagoo u weecanaya dhanka hore ama gadaal, oo xakameynaya tuumbo iskuxiran 1,500 oo awooda fardaha ah.
“Waxaan rajeynayaa inaan kugu arko England dhexdeeda oo shir jaraa’id oo kale ku qabto,” Zapata ayaa u sheegay suxufiyiinta ka hor inta uusan duulin.